नेविसंघमा रमिता: अध्यक्ष शेयर दलाल, महामन्त्री कलेजका प्राध्यापक « Post Khabar
नेविसंघमा रमिता: अध्यक्ष शेयर दलाल, महामन्त्री कलेजका प्राध्यापक
Published on: 13 February, 2020 5:53 am
संगठन विद्यार्थीको, तर नेतृत्वचाहिं दलाल, ठेकेदार र उद्यमीको भएपछि गाइजात्रा चल्ने नै भयो । यो रमिता हो नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघको !
मुख्य नेताबीच भागबण्डा लगाएर नेतृत्व चयन गर्ने भनिए पनि उपगुटभित्रै रडाको मच्चिंदा २१ मा १० जनामात्र मनोनीत भएका छन् , ११ पदाधिकारीले पूर्णता पाउन बाँकी छ । र, परेका पदाधिकारी पनि गैरविद्यार्थी छन् ।
अध्यक्ष बनाइएका राजीव ढुंगाना अहिले पनि सुनसरी कांग्रेसका सचिव हुन् भने उनको व्यवसाय शेयर कारोबार हो । उनी शेयर दलाल नं. ३४ को लाइसेन्समा सुमेरु सेक्युरिटिजका नाममा शेयर दलालीको व्यवसायमा सक्रिय छन् । नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइसकेका उनी ठेक्कापट्टामा पनि सक्रिय छन् । नेविसंघ नेतृत्वका लागि ३२ वर्षे उमेर हद तोकिए पनि उनी ५० हाराहारीका हुन् ।
प्रकाशमान सिंहको कोटाबाट महामन्त्री बनाइएका प्रभातकुमार दाहालले पढाई छोडेको २० वर्ष भयो । पेशाले निर्माण व्यवसायी हुन् । उनि तरुण कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.का सञ्चालक हुन । मकवानपुरमा इन्द्र बानियाँसंग कांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा उठेर हारेका थिए। अहिले चिठ्ठा परेर नेविसंघको महामन्त्री बनेका छन् ।
अर्का महामन्त्री मुक्तिराम पौडेलचाहिं देशमा केही नहुने भयो भन्दै केही वर्षदेखि परिवारसहित क्यानाडा बस्न थालेका थिए । उता माइनस ४० डिग्रीसम्मको चिसो खानुभन्दा केही दिन आफ्नै देशको हावा खानु उचित लागेर छुट्टीमा काठमाडौंतिर डुल्दै थिए । तर, हावामात्रै खाएनन्, फ्याट्टै महामन्त्री पडकाई दिए ! क्यानाडाको पिआरसमेत लिएका मुक्तिराम पेशाले बुटवल हेल्थ इन्स्टिच्युटका मालिक हुन् । पद्मकन्या क्याम्पसकी पूर्वनेतृ चन्दा अधिकारी उनकी पत्नी । चन्दा पनि यता केही नहुने भो भन्दै क्यानाडामै बस्ने गरेकी छन । मुक्तिराम प्रदीप पौडेलका भरलाग्दा आर्थिक सहयोगी र रामचन्द्र पौडेलमार्फत महामन्त्री बनाइएका ।
रामचन्द्रकै कोटाबाट महामन्त्री बनेका दीपक भट्टराईचाहिँ सधैं क्याम्पस जान्छन, तर विद्यार्थीको रुपमा हैन, प्राध्यापकका रुपमा ! त्रिचन्द्रका आंशिक प्राध्यापक र पार्टी नेता गोविन्द भट्टराईको काकाका छोरा पनि हुन उनि । कृष्ण सिटौलाले पनि आफ्नो कोटाबाट तुलसा पन्तलाई उपाध्यक्ष बनाएका छन् । उनीचाहिं बानेश्वरमा गर्ल्स होस्टेल चलाउछिन ।
अध्यक्षसहित ६ उपाध्यक्ष , ९ महामन्त्री र ६ सहमहामन्त्री गरि २१ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये देउवाले अहिलेसम्म आफनो कोटाबाट अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, ३ महामन्त्री र २ सहमहामन्त्री बनाएका छन् । रामचन्द्रले ३ महामन्त्री , २ उपाध्यक्ष र २ सहमहामन्त्री पाए । रामचन्द्रको कोटामा सशांकले भनेर उर्मिला थपलियाको नाम पठाए । अहिले अर्को एउटा मान्छे पठाउनका लागि देउवासँग अनुरोध गरेका छन् । रामचन्द्रले अझै २ उपाध्यक्ष र २ महामन्त्री पठाउनु पर्ने हो । तर, आकांक्षी धेरै हुँदा उपगुटभित्र रडाको शुरु भएको छ । देउवाले पनि २ महामन्त्री त बनाए, तर थप महामन्त्री र उपाध्यक्षको नाम दिन सकिरहेका छैनन् । (जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार गरिएको)